Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa La Gudboon Shacabka Soomaaliyeed ee Ku Hoos Nool Itoobiya, By. Dr Maxamuud Ugaas.
Maxaa La Gudboon Shacabka Soomaaliyeed ee Ku Hoos Nool Itoobiya, By. Dr Maxamuud Ugaas.
Maanta shalay ma aha! Waxaa la gudboon shacaka Soomaaliyeed ee ku hoos nool Gumaysiga Itoobiya arrimahan soo socda:
1. Shacabku isaga oo eebbe talo saaranaya yeeysan magac ka hooseeya Soomaali qaadannin.
2. In aysan xaqirin halgammadii ka soo horjeeday Gumaysiga ee soo jiray ee waligood diiddannaa dulmiga.
3. In aysan oggollaannin in loo kala qaybiyo qabiil-qabiil.
4. In aysan oggollaannin la wada hadashiiyo maamulka dad-cunka ah ee gabbalkiisu dhacay ee ka jira Jigjiga .
5. In ay ogaadaan in ay shacab yihiin, aynana lagama maarmaan tahay in ay helaan haykal siyaasadeed iyo cid hoggaamisa marka ugu danbeysa.
6. Haddii isbeddel dhab ah laga helo Gumaysiga Itoobiya, in shacabku isgaliyo sidii ay ku meel marsan lahaayeen riyadoodii waligood ay ku riyoon jireen, ee ahayd xorriyadda, taasoo mari doonta marxalo fara badan, xilli kasta ha qaadatee.
7. Macnaha xorriyad ma aha calan la sudho iyo gooni isu-taag kaliya; ee waa process (dariiq) sida geedka u baxa, oo ka billaabma isku tashi, ismaamul, tabaraysi, hanaqaad, iyo in shacabku gaadho in uu codkiisa ku gaadhi karo xorriyad
8. Shacabku yuusan ku qancin in la beddelo maamulka dad cunka ah ee Jigjiga, ee waa in ay raadsadaan dhammaan wixii ay Itoobiya xaq ugu leeyihiin oo dhan.
9. Ha layska ilaaliyo aflagaaddada, iyo dakanada la kala galayo, ha ugu yaraato faallo yar oo aad ku durto qof si wax u yidhi adna aad si u fahamtaye.
10. Ha loo turjumo qofkasta oo kacdoonkan taageersan in uu yahay halyeey, qofkaasina waa in uu iska ilaaliyo in uu la kala safto wixii loolan siyaasadeed kuwada jira. Waayo taasi ayey rabaan in cadowgu inagu kala qaybiyo mar kale. Markase ay arkaan cadowgu in ummadda Soomaaliyeed ee dulmani isku jaho wax u wadaan, meel ay inaga soo kala galaan ma jiri doonto.
Urur siyaasadeed magacii kuma hadlayo habayaraatee, waa aragtideyda Soomaalinimo.
Dr. Maxamud Ugaas